Ihe na-esi isi na ngwa mgbakwunye WordPress & Nyocha | Martech Zone
Inye aka na imeghe ihe mepere emepe nwere ike ịtụnanya, mana izu a abụghị otu n'ime oge ndị ahụ. Anyị na-atụnye ụtụ na obodo WordPress afọ iri ugbu a. Anyị emeela ọtụtụ plugins. Fọdụ lara ezumike nká, ndị ọzọ nwekwara ọhụụ na-enweghị atụ. Nke anyi Image Rotator ngwaọrụ ngwa mgbakwunye, ebudatara karịa 120,000 ugboro ma na-arụ ọrụ na saịtị 10,000 WordPress.
Otu ngwa mgbakwunye anyị tinyeworo ọtụtụ narị awa na ya bụ CircuPress, Ihe mgbakwunye email email anyị mepụtara maka WordPress. Ihe mgbakwunye ahụ dị oke mma, na-enye ụlọ ọrụ ohere ịme ozi email dịka ha ga-esi rụọ peeji peeji… mana izipu ozi email site na ọrụ anyị ka anyị nwee ike ijikwa nchịkọta nsuso, njikwa ibiaghachi, ndị debanyere aha na ndebanye aha. Ewerela ya akụrụngwa ịrụ ọrụ iji nweta nke a, mana anyị nọ n'ime ya maka ogologo oge. Anyị kwenyere na ndị ọrụ WordPress kwesịrị ịnwe ikpo okwu email nke dị mfe iji.
Ka anyị na-arịgo n'elu ikpo okwu, anyị anaghị ebo onye ọ bụla ebubo maka iji ya - ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị jụọ m. Ndebanye aha ahụ na-enye nsụgharị n'efu ma ọ bụrụ na izipu ihe na-erughị 100 ozi ịntanetị kwa ọnwa, mana anyị agbatịwo nke ahụ ka anyị gbanwere usoro ịgba ụgwọ WooCommerce ma rụọ ọrụ na ntọala nke ikpo okwu iji mee ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe.
O juru m anya na anyị nwere popup nyocha 1-kpakpando na saịtị Plugin. Ozugbo ahụ, achọgharịrị m ịhụ ihe dị njọ:
Ya mere… onye ọrụ a abanyeghị aka n'ezie ma kwuo na ndị ahụ enyo anyị na usoro ndebanye aha anyị. O juru m anya kemgbe anyi anaghị arịọ maka ozi kaadị akwụmụgwọ. Ọ gaara achọpụta na ọ bụrụ na ọ debanye aha ndebanye aha ya, mana ọ meghị.
Echere m na nke a bụ ihe ezighi ezi iji mee ka ọ mara Automattic, na-ede onye nkwado ha:
Nzaghachi m natara bụ ihe jọgburu onwe ya karịa nyocha ahụ n’onwe ya. M na-agaghachi na-aga na onye ahụ na Automattic na-ekwu na saịtị anyị dị ka ọ dị ata n'ihi na ọ nweghị ọnụahịa edepụtara n'ihu ọha. Shady?
M chetaara ya na anyị AJ NOTỌ B FORGHAR Kaadị akwụmụgwọ ozi tupu ịnye ọnụahịa nye onye ahụ. Ma na mgbe ahụ, anyị arụtụbeghị ebubo ịgba ndị mbụ kwudoro. Debanyere aha maka ọrụ na-efu efu? Ekwenyesiri m ike na ị nwere… WordPress rịọ ndebanye na enweghị ozi ọnụahịa ọ bụla na ọrụ ndị ọzọ. Shady?
Ghara ikwu na A na-ezo aka na ọnụahịa ọnụahịa na Ajụjụ nke ngwa mgbakwunye anyị. Ka ọ dịgodị, m bipụtara ya ibe ọnụahịa na menu anyị ka onye ọ bụla ghara inwe mgbagwoju anya, mana ka rịọrọ ka ewepụ nyocha ahụ. Nzaghachi:
Yabụ, na ndị ọzọ okwu, onye kwetara jiri n'ezie ọrụ anyị enyere ohere iji ọnụego 1 kpakpando tụlee ọrụ anyị. Dịka anyị na-arụ ọrụ iji nyere obodo mepere emepe aka ma nye azịza dị ọnụ ala, amachaghị m otu nke a si enyere onye ọ bụla aka. Nke a bụ isi okwu na - egosi edemede - onye edemede kwenyere na ọ nweghị ịbanye ma ọ bụ jiri ọrụ anyị.
Ọ ga-adị m iche na onye nyocha ahụ debanyere aha ma tinye anyị na ikike nke ngwa mgbakwunye - ọbụlagodi na-agbakwunye na ọ chọrọ ka ọnụahịa dị na saịtị ahụ ga-adị mma. Mana nyocha 1-kpakpando maka ihe ọ na-ejighi mee ihe enweghị mgbaghara.
Melite 11/2: Ugbu a ka m iwenwere isi ọkụ, enweghị ezi uchenwere jerk, ara, na enweghi isi n'ihi na enwere m iwe na onye na-ejighi ngwa mgbakwunye nyere nyocha 1-kpakpando, ọ pụtara na ọrụ anyị adịghị akwụwa aka ọtọ, nakwa na onye ọ bụla debanyere aha bụ nzuzu. Ọrụ ha na-abanyeghi maka.
Email m dị n'okpuru, azịza ha dị n'elu.
Ma eleghị anya, ọ bụ oge m ga - eme ihe ndị mgbakwunye mgbakwunye ndị ọzọ na - eme Matt na ndị otu na WordPress anaghị enwe ekele, ma na-enye onyinye oge na mgbalị ọ bụla na WordPress ma bido na-ere plugins na saịtị nke m. O doro anya na ha anaghị eche banyere ndị na-akwado ikpo okwu ha.
Melite 11/3: Taa, ndị ọrụ afọ ofufo na WordPress kpebiri na m chọrọ agụmakwụkwọ na ahịa ma nye m ndụmọdụ ka m bụrụ nwoke ka mma. Email m dị n'okpuru, azịza ha dị n'elu.
Tags: Mike epsteinwordpress ngwa mgbakwunye FimWordPress pluginswordPress Fim Nyocha
Nọvemba 3, 2015 na 9:58 nke ụtụtụ
Ekwenyere m gị na usoro nyocha na-aga dị ka onye ndụmọdụ njem. Enweghị amụma mmesi obi ike gbasara sistemụ nyocha mana a na-eji nyocha dị ka ebe ire ere ọbụlagodi ngwaahịa/ọrụ na-adịghị arụ ọrụ dịka ha na-ekwu ma ọ bụ na-emebi amụma ikike. Nke a abụghị ikpe ziri ezi na ọ bụghị ọkachamara. Enwekwara ọtụtụ usoro nyocha/ọkwa dị na mpụga mana ị nwere ike jụ ọkwa dị ala.
Ekwetaghị m na ọkwa/ntụle n'ihi na ndị ọzọ na-anọghị n'otu na-ejikwa ha ma ha enweghị asambodo sistemụ (dị ka iso ma ọ bụ ihe yiri ya).
Ekwetaghịkwa m ọtụtụ ihe na ahịa dị ka envato ma ọ bụ ihe yiri ya. N'oge gara aga etinyere m ụfọdụ egwu (abụkwa m onye egwu) na anabataghị ha. Ugbu a, ana m ede egwú maka ụfọdụ ụlọ ọrụ ihe nkiri.
Nọvemba 3, 2015 na 11:56 nke ụtụtụ
Enwere ụfọdụ sistemụ na-arụ ọrụ n'ezie nke ọma. Ndepụta Angie, dịka ọmụmaatụ, na-enye onye ọrụ nkwekọrịta ohere ime ka ihe dị mma na mgbe ekwenyere ya dị ka ihe na-eju afọ, enwere ike gbanwee nyocha ahụ na-adịghị mma. Ọ bụ ihe nwute na nke a nyochaa guzo - ọ na-enye dịghị uru na obodo na ike na-emerụ anyị plugin si doro.
Nov 4, 2015 na 10:06 ehihie
Bịa n'akụkụ gbara ọchịchịrị ma nabata ike nke CMS azụmahịa, Doug! 🙂
Nov 5, 2015 na 3:14 ehihie
Ndị mmadụ na-akpasu iwe abụghị naanị na obodo mepere emepe.